The Forest Wonderland, Manomboha Diary Nofy丨Rongqiao Decor + Design MU - Faucets lakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Ilay Ala Mahagaga, Manomboha dia an-tsambo 丨 haingon-trano Rongqiao + Volavola MU
Ilay Ala Mahagaga, Manomboha dia an-tsambo 丨 haingon-trano Rongqiao + Volavola MU
2021 / 06 / 01 FisokajianaInterior design 6245 0
Zhongmu Design Interior Design Alliance
Rongqiao-Xingyu dia miorina amin'ny faritry ny sandan'ny South Ring Ring Road ao Fuzhou. Ny endrika vokarin'ny trano fonenany dia misy akony lalina amin'ny fahitan'ny tanora ny fiainana sy ny fiainana. Izy io dia natokana hanokafana ny fidirana amin'ny fiainana misy kalitao ary fampisehoana fironana, zavakanto ary fiainana mivoatra hafa. Ny haingon-trano malefaka an'ny ivon-tsenany dia noforonin'i Rongqiao Decoration miaraka amin'ny Zhongmu Design.
Amin'izao fotoana izao, ny foto-kevitry ny "de-fivarotana" dia niely sy niditra an-tsokosoko tamin'ny lafiny rehetra amin'ny famolavolana foibe fivarotana, na avy amin'ny famolavolana ny lohahevitra, ny famolavolana ny firafitra, na ny haingon-trano. Zhongmu Design, izay miziriziry foana amin'ny foto-kevi-dehibe hoe "miaina mifanaraka amin'ny fiainana", dia mino fa ny "foibe fanandramana estetika CO-Life" isan-karazany teraka tamin'io fironana io dia vahaolana vaovao amin'ny fahitana sy ny fifamatoran'ny fomba fiaina maro. Sehatra fifanakalozan-kevitra eo amin'ny fiaraha-monina misy tanora sy mitambatra ary maharitra ity izay manitatra ny eritreritra tsy misy farany ny fiainana tsara kokoa.
Havia: Sarin'i Alice ao amin'ny Wonderland / Ankavanana: Fikasana ho an'ny famolavolana
Noho izany, ny ekipa mpamorona dia naka aingam-panahy avy amin'ny tantaran'ny "Alice in Wonderland" ho an'ny raharaha Fuzhou Rongqiao-Xingyu Sales Center. Amin'ny tontolon-karena ankehitriny, ny habaka dia omena ny lohahevitra haingo malefaka an'ny “Ala Mahagaga, Mirenireny an-jaridaina”. Manamafy ny toetran'ny fifamoivoizana amin'ny habaka avy amin'ny lafiny maro izy, toy ny traikefa kanto, fahafinaretana ara-javakanto, ary teboka fahatsiarovana, manasongadina ny maha-tokana ny fomba fiainam-pitondrana an'ny taranaka vaovao.
Ny tsipika fitantarana lehibe momba ny habaka dia ampifandraisin'ny vavahady mihodina amin'ny endrika samihafa. Tsy fifandraisana voajanahary eo amin'ny faritra misy azy io, fa koa fanoharana an-tsaina ny "lavaka bitro", izay voaravaka singa ara-javakanto sy fametrahana voninkazo misy lohahevitra bitro. Mampanan-karena ny hatsaran'ny foto-kevitra sy ny ambaratongan'ny habaka io. Mihidy amin'ny fidirana isan-karazany ny olona, ​​mivezivezy eo anelanelan'ny faritra mahavariana sy manokatra diany nofinofy.
Mandalo ny efitry ny tetezamita misy rantsana sy voaloboka maitso, miditra amin'ny faritra fifampiraharahana ny iray. Ny lokon'ity efitrano ity dia maitso ala vaovao. Eo ambanin'ny rivo-piainana voajanahary manankarena sy ny toerana ivelany natolotry ny varavarankely lehibe hatreny amin'ny valindrihana, ny fahatsapana ny olona dia alentika ao anaty ala mahavariana amin'ny zava-misy sy zava-misy, mahatratra toe-tsaina sy vatana milamina.
Faritra fifampiraharahana lalina
Faritra hipetraka miendrika semi-arc dia rakotry ny kaktus maitso sy bararata mihetsiketsika, miaraka amina latabatra kafe mihintsana, jiro miendrika dewdrop ary firavaka moss mihantona eny afovoan'ny rivotra, ny habaka iray manontolo dia feno fofona voajanahary akaiky sy manonofy.
Rano fisotro rano
Na aiza na aiza misy ny olona dia afaka mipaka eo anelanelan'ny “lavaka” sy ny “zohy” ny masony, manitatra sarin-javatra hafa. Manomboka amin'ny faritry ny fifampiraharahana ka hatrany amin'ny bara-drano, mihena tsimoramora ny volavola manomboka amin'ny ranomainty matanjaka mankany amin'ny fifandraisana mirindra amin'ny maitso maitso, fotsy tsotra ary volamena taloha. Ny hevitra nomen'ny mpamolavola dia mihodina manodidina ny zava-boahary voajanahary sy ny estetika tsotra, izay azo aseho an-tsary na an-tsary, ary mahafinaritra sy tononkalo miaraka amin'ny fiteny madio ny seho.
Faritra boaty fasika
Ireo varavarankely sy vavahady tsy ara-dalàna napetraky ny mpamorona amin'ny fomba tsy azo ovaina dia mahatonga ny seho kanto eo anelanelan'ny faritra mifanakaiky mifanindry sy miampita. Rehefa eto amin'ity faritra ity ny olona dia mampitombo ny fahatsapana ny halaliny sy ny ambaratonga ambony izany. Ny tsipika an'ireo kofehin-jiro miolikolika dia mampiaka-peo ny lalan'ireo vavahady. Mifampiresaka izy ireo ary manisy efitrano ankehitriny miaraka amina fomba minimalista.
Efitra dite / efitrano VIP
Eto, ny mpamorona dia te-hamorona toerana misy atmosfera mazava toy ny dite madio. Izy io dia misy latabatra dite hazo tsotra sy kanto, dite vita amin'ny seramika fotsy, seza telozoro mangarahara sy mahaliana, ary fametrahana zavakanto momba ny zavakanto vita amin'ny lolo sy ravina samihafa. Ao amin'ny atmosfera maivana sy kanto, manaitra ny natiora misy eny amin'ny habakabaka izy, toy ny hoe ny setroka dite fotsiny no nandrahoina.
Ny ekipa mpamolavola dia nampihatra ny filozofia amin'ny habaka voajanahary. Ny fotony dia mitoetra amin'ny "fiainana mifanaraka amin'ny fiainana" ary ny fandikana ny filozofia amin'ny fiainana amin'ny kapoka artista. Raha ny ivon'ny varotra Fuzhou Rongqiao-Xingyu dia manohy ny fomba fanaony ankehitriny amin'ny famolavolana ny fiainana sy ny fanehoana endrika hatsarana ny mpamorona ary manome endrika vaovao ho an'ny ivom-pivarotana ho toy ny fanangonana fomba maro. Ao an-tsisin'ny vavahady, amin'ny fiovan'ny hazavana sy ny aloka, ary ny valin'ny angano ao amin'ny ala mikitroka ala, dia natsangana ny efitrano iainana poetika sy feno zavakanto. Sehatra misintona tanora ity izay mitondra faniriana sy eritreritra.
Drafitra fivarotana rihana
Anaran'ny tetikasa. Fuzhou Rongqiao-Starhill Sales Center
Adiresin'ny tetikasa ｜ Fujian Fuzhou
Tompona ｜ Rongqiao Group Fuzhou Company
Faritra famolavolana Office Biraon'ny fivarotana 472㎡
Famolavolana fanaka malefaka Company Rongqiao Decoration Company, Zhongmu Design
Ekipa mpamorona Department Sampana mpamorona RongQiao, Pan Xianting, Chen Jun, Tian Di, Ren Xingli
Famolavolana famolavolana sarotra ｜ Shanghai Daji Architectural Design Consulting Co.
Misaotra manokana Center Ivotoerana R&D an'ny vondrona Rongqiao
Ekipa mpaka sary ｜ Ruhaha
Fujian Rongqiao Decoration Engineering Co., Ltd. dia naorina tamin'ny taona 2007 ary zanaky ny Rongqiao Group no tompon'andraikitra iray manontolo. Amin'izao fotoana izao, manana ny mari-pahaizana kilasy voalohany amin'ny fifanarahana matihanina amin'ny injenieran'ny haingo fananganana sy ny mari-pahaizana B manokana amin'ny famolavolana injenieran'ny haingon-trano. Manarona ny famolavolana sy ny fananganana (ao anatin'izany ny injenieran'ny haingon-trano malefaka) ny haingon-trano sy ny fanaingoana ny faritra fampisehoana trano, trano famaranana, tetik'asa ara-barotra, hotely, fanabeazana ary fitsaboana. Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny fananganana ekipa matihanina miaraka amina endrika sy famolavolana kilasy voalohany, ary ho lasa orinasa fandravahana manan-danja eo amin'ny indostrim-pirenena.
Niorina tamin'ny 2010 tany Shanghai, "Zhongmu Design" manome endrika habakabaka, famolavolana kojakoja malefaka, famolavolana fanaka sy fanamboarana ary serivisy fividianana kojakoja ankapobeny ho an'ireo vondrona hotely lehibe sy orinasan-trano, mandrakotra ny famolavolana sy ny fahatsapana ireo hotely fivarotana, klioban'ny varotra, villa ary trano maodely.
Ny filozofia famolavolana tena dia ny "miaina mifanaraka amin'ny fiainana", ary nifikitra tamin'ny fanahin'ny fanavaozana nandritra ny 10 taona mahery. Niasa teo amin'ny sehatry ny trano sy tany fizahan-tany ara-kolotsaina izahay nandritra ny 10 taona mahery, ary miaraka amin'ny lojika henjana sy ny fahaiza-manao fampidirana matihanina dia manampy ny mpiara-miasa izahay hamantatra ny toeran'ny vokatra, ny drafitra famolavolana ary ny fampiharana ary manome tsara vahaolana famolavolana. Ao amin'ny volavolanay, dia mijery ny fifandraisana misy eo amin'ny natiora, ny olombelona ary ny fiainana isika, ary mamorona traikefa amin'ny habakabaka tsy manam-paharoa amin'ny fiteny famolavolana ankehitriny hanehoana ny hakanton'ny fiainana.
Previous :: Rafitra tsotra amin'ny habakabaka, fampidirana zavakanto ambonin'ny fiainana | GS Design Next: Akanjo toy ny lamba malefaka sy metaly mamirapiratra - Gorda vy
2021 / 08 / 15 3902
2021 / 08 / 15 4676
2021 / 08 / 15 4161
2021 / 08 / 14 3744